သုံးပင်လိမ် အရှုပ်တော် (စ/ဆုံး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သုံးပင်လိမ် အရှုပ်တော် (စ/ဆုံး)
သုံးပင်လိမ် အရှုပ်တော် (စ/ဆုံး)
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Sep 26, 2012 in Creative Writing | 30 comments
နောက်ဆုံးအပိုင်းကို ကျော်ရှုဖတ်ရှုလိုပါက ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
စာဖတ်သူများ ခင်ဗျာ ….။ ကျနော့်အနေဖြင့် အထက်တွင် ရေးသားခဲ့သည့်အတိုင်း ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက် ဇာတ်ကွက်များအား ပြသပြီးနောက် အဆုံးပိုင်းတွင် မည်သို့ ဖြစ်သွားသည်ကို ပေါင်းစု ပြသခဲ့ပါ၏။ ဦးဖြူကောင်းနှင့် အဆိုပါ လူလေးဦးတို့ ပတ်သက်ပုံများကို ရေးပြရပါလျှင် လွန်စွာ ရှည်လျားသည့် ဝတ္ထုကြီးတစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားနိုင်သည့်အတွက် ဤနေရာတွင်ပင် ဇာတ်သိမ်းလိုက်ရပါ၏။ အကယ်၍ အလျဉ်းသင့်ပါမူ အဆိုပါ ဇာတ်လမ်းအား ရေးသားပေးပါအံ့။
ကျနော့်အနေဖြင့် ဝန်ခံရမှာမူ ကျနော်မှာ ဝါသနာအရ စာရေးနေသူ ဖြစ်သည့်အတွက် ကျနော် ရေးသားထားသည်မှာ ဖတ်ကောင်းချင်မှ ဖတ်ကောင်းပါလိမ့်မည်။ လိုအပ်ချက်များလည်း များစွာ ရှိနေပါလိမ့်မည်။ သို့အတွက် သည်းခံ၍ ဖတ်ပေးတော် မူကြပါရန်။ ထို့ထက် ကျနော့်၏ အရေးအသားများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်ပေးကြပါရန်လည်း တောင်းဆိုအပ်ပါသည် ခင်ဗျာ။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ခင်ဗျာ ….။
” သကြား ပုလင်း အံစာ ” ရှင့် ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွေလိုဘဲ ဆန့် တငန့် ငန့်ဇာတ်သိမ်းသွားပေမဲ့ အစပိုင်းမှာတော့ အတော် စွဲဆောင်မှုရှိပါကြောင်း နှင့် ဇာတ်လမ်း အသေးစိပ်အား စောင့်မျှော်အားပေးနေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း..
စောစောစီးစီး လာရောက် အားပေးသွားတာကို
အနော်က ကျေးဇူး အားလကီးတင်ဂျောင်းပါလို့ …
ဇာတ်လမ်း အသေးစိပ်ကို အားပေးအုံးမယ် ဆိုလို့လည်း
ဝမ်းသာမိပါရဲ့ ခင်ဗျာ ..
(ဒါပေမယ့် အဲ့ဟာဂျီးကို ဘာမှ မတွေးရ၊ မရေးရ သေးဘူး ခည ..)
အရမ်းဂွတ်တဲ့ နာမည်လေးကို ဖယောင်းမယ်လေးက ချစ်စနိုးလေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သွားပါပေါ့ကလား
သကြားပုလင်းမဟာဂျာဂျာ ရဲ့ 
ဒီလူဂျီးက ဖယောင်းမယ်လေး … ဆိုပဲ ..
အဟမ်း .. ဟမ်း …
ဘာမှ ကြောဒေါ့ဘူး …
အဲ .. မေ့တွားလို့ ..
ကျုပ်ပို့စ်တွေကို အမြဲလိုလို ကွန်မန့်များ ချီးမြှင့်ပေးတဲ့ ဆြာပေ ကို ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိကြောင်းတော့ဖြင့် ဒီနေရာလေးကနေ ပြောလိုက်ပါရစေ ခင်ဗျာ …။
အိုက်ဒါ ပြီးတွားဒါလေ ..
ပီးဒေါ့ အနော်ဂ လူဆိုး ဟုတ်ပါဘူး ..
လူချောလူလှ လူဂျိုလေးဘာ … အဟီးးး
အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါဗျ ..
စောင့် နေပါတယ်ဗျို့  ….။
နောက်ထပ်ချဲ့ ကားပြီးရေးမှာကို …
တော်တော်ဆိုးတဲ့ ခြောက်မျက်နှာ ..
ဒီက ဇတ်လမ်း အလကားပေးပါမယ်ဆိုနေတာကို မဆက်သွယ်ဘူးးးးး
ကျုပ်က စာရေးလို့မရလို့ ရေးစေချင်လွန်းလို့ မောင်ရင့်  အရေးအသားနဲ့ လိုက်ဖက် လို့ ….လို့ …..လို့…..
ကျုပ်က ဘိုဆက်သွယ်ရမှာတုံး ပြောဦးလေဂျ ..
ဒီဂလည်း ခင်ဗျား ပြောမယ့်ဇာတ်လမ်းကို သိချင်နေတာပဲဂျ ..
ဘယ်အချိန်ကျမှ ပြောမှာမှန်း မသိလို့ ထပ်မမေးတော့ဒါဘာ ..
အားပေးသွားတဲ့အတွက်ကို ကျေးဇူးပါဗျ …
ကျုပ်အီးမေးလိပ်စာ ရှာပြီးဆက်သွယ်ဖို့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ 
မောင်ရင့်မေး လိပ်စာထဲ့ ပေးလိုက်ပေါ့။
ကျုပ်က ကွန်ပူဒါ ပိတ်ရင် မီးပလပ်ကိုဘဲဆွဲဖြုတ်တတ်တဲ့ အကောင် ။
အဲဒါတွေနဲ့ ပါတ်သက်ရင် ဒုံး ဝေးတယ် ဗျို့ 
ဒါပေသိ ခုရက်ပိုင်းတော့ ပြောမပြနိုင်သေးဘူးနော်
အဲ့လူက ကိုမိုးကောင်း လို့ ခေါ်သဗျ ..
ဆားပုလင်း မိုးကောင်း ပေါ့ဗျာ .. အဟဲ ..
ဒါပေမယ့် ဆားပုလင်းနှင်းမောင် ကိုတော့ဖြင့် မမှီပါဘူး ..
သူက တပည့် မဟုတ်လားဗျ …
အားပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျ နော့ ..
အော်… ခုမှ ဇတ်ရေလည်သွားတော့တယ်…
သို့ပေမဲ့… ဘာကြောင့် အငြိုးတကြီး ဓါးချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ သတ်ကြတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်း မျှော်လင့်နေပါအုံးမယ်လို့….. :harr:
အံစာသိင်္ခသူရ ဆက်ရေးပါ ဒါဗြဲ..။
အရှုပ်တော်ပုံကိုမရှင်းပဲ အရှုပ်အတိုင်းထားတယ် တော်တော်ဆိုးတာပဲ..။
ဆားပုလင်းရဲ့ သဲလွန်စရှာပုံ အမှုလိုက်ပုံလေးတွေကိုလည်းရေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ် အံစာသိင်္ခသူရရေ
စကားပြောလေးတွေကို ဘိုးတင်ပေးပါလားဗျာ ဖတ်တာ ရောရောသွားလို့
သေသူတစ်ယောက် သတ်သူလေးယောက် (တကယ်သတ်သူတစ်ယောက်အပါအ၀င်) ဆိုတော့
သုံးပင်လိမ်မက ငါးပင်လိမ် တောင်ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလား ????
အဲ.ပြီးပြီလား သိပ်နားမလည်သေးဘူးလေ ပြီးနဲ့အုံး နောက်အပိုင်းလေး ဆက်ပြီး လူရွယ်ရဲ့အကြောင်း
လည်း ဆက်ရေးမှ ဇာတ်ရည်လယ်မှာပေါ့
အားပေးသွားပါတယ် ငံပျာရည် ပုလင်း အံကြီးရေ..
ဇာတ်သိမ်းမှာ အလုံးစုံ မရှင်းတော့ ဟက်ကော့ကြီးတော့ ဖစ်သွားမိပါတယ်..
မကျေနပ်ဘူး အချစ်ရယ် (၁) ကပြန်စမယ် …. လူဇိုးကြီး အံချာတုံး … ဇာတ်လမ်းကို မရှင်းပြဘူး … ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးက ဇာတ်သိမ်းခန်းလေ … ဘာမှမရှင်းပြတော့ ဘာမှမသိတော့ဘူး …
ခုလို လာရောက် အားပေးဖတ်ရှုသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ …
ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ဆက်စပ်ပုံတွေကို ရေးပေးသွားပါမယ် ခင်ဗျာ …
ကျနော် ဆိုလိုတဲ့ သုံးပင်လိမ် ဆိုတာကတော့ ဇာတ်အတွင်း သုံးပင်လိမ် ဇာတ်ထုပ်ထက် သုံးပို့စ်ခွဲလိုက်တဲ့ သုံးပင်လိမ် လို့ ဆိုရင် ပိုပြီး မှန်ပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ …
နောက်ပိုင်းမှာ ဇာတ်လမ်းကို ရှင်းလင်းပြတ်သားအောင် ထပ်ပြီး မဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း တောင်းပန်ပါကြောင်း …
ခုဒေါ့ ဆံပင်သုံးချောင်းလောက် ဖြူသွားလို့ ဆေးဆိုးလိုက်ပါအုံးမယ် …
စကားမစပ် .. နောက်များလည်း အားပေးတော် မူကြပါအုံးလို့ ..
တော်ပီ ….. နောက်ဆိုဘယ်အားဆေးမှ မကျွေးတော့ဘူး ……. စိတ်ဆိုးတယ် …….
သားသားကို ဘာရို့ ချိတ်ချိုးဒါဒုံးဂျ ..
ရော့ .. မုန့်မုန့်စား …
ဟယ် ဆယ်ယောက်ကြီးတောင်သတ်သွာတာလား နှစ်ကောင်တောင်အဆစ်ပါသေး
ကျုပ်ကတော့ ပေါ်ပြီးဆိုပြီး အားရ၀မ်းသာနဲ့
အပေါ်ပိုင်းမှာ အသဲမည်းနဲ့ ဖတ်သာ ဖတ်လိုက်ရတယ် … ဇာတ်သိမ်းကျတော့ .. စိတ်ထဲ သိပ်မကျေနပ်သေးဘူး …. ။ သပွတ်အူလိုပဲ …. ဟိုလူဂျီးက …. ။ ဇာတ်သိမ်းကို နားမလည်တာ .. ကိုယ်ကလည်း .. ဝေးတာကိုး … ဟီး ။
ဦးမဟာရာဇာ အံစာတုံးကြီး ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်းနှင့် ပြည့်စုံစွာ ဆက်ပြီးရေးနိုင်ပါစေဗျာ။
နောက်တစ်ခါ… ရှည်ရှည်လျားလျား..ရေးရမယ်နော် ။